Ọnụ ego arụmọrụ na-adịghị mma | Martech Zone
O siri ike mgbe nile ige onye na-ere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ya ntị ịgwa gị na ị ga-azụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha iji nweta ego. Na ịntanetị, ọ bụ eziokwu naanị, n'agbanyeghị. Saịtị ngwangwa, ezigbo ngwa ọrụ, ezigbo imewe na ntakịrị ntụnye ndụmọdụ nwere ike ime ma ọ bụ mebie ụlọ ọrụ n'ịntanetị.
Ọnụahịa arụmọrụ weebụ, a SmartBear infographic, na-egosipụta mmetụta obi ọjọọ nke oge na-adịchaghị oke egwu na arụmọrụ mkpanaka na-adịghị mma n'afọ niile.
Tags: Commercemgbanwe ntụgharị-erie-retailecommerceretailarụmọrụ weebụ
Como: Wuo Mobile App na Koodu